Mari inowanikwa muhomwe yemusika, chii chekuita navo? | Ehupfumi Zvemari
Mari inowanikwa muhomwe yemusika, chii chekuita navo?
Misika yemari yemari inowanikwa mubhadharo yakawanikwa kubva mukushanda mumisika yemari. Ndiwo mutsauko wakagadzirwa pakati pemutengo wekutenga nemutengo wekutengesa. Nekudaro, izvi zviwanikwa zvakakomba, kwete mambure sevamwe vatengesi vadiki nepakati vanogona kugadzira. Nekuti zvirizvo, huwandu uhwu huchafanirwa kudzikiswa zvese makomisheni uye mari mukutarisira kwayo uye kugadzirisa izvo kufamba uku pasina mubvunzo kunosanganisira. Pasina kukanganwa mabatirwo emitero ayo mashandiro achave nawo uye kuti zvinoenderana nehunhu hwemubhadhari uchave nemhedzisiro. Nekudaro, zvimwe zvinhu zvemarudzi akasiyana siyana zvichafanirwa kudzikiswa kubva pamari inowanikwa inowanikwa mumisika yemari.
Chero zvazvingaitika, icho chinangwa icho vatengi vese vanoshuvira, pasina chaasarudzika. Uye iyo yakakura mari inowanikwa, zviri nani kune zvako zvaunofarira. Chero izwi racho kunoiswa mari dzako: pfupi, yepakati kana refu. Kufanana neprofile raunopa sevatengesi, ndiko kuti, vane hasha, vepakati kana vanochengetedza. Dzese nzira dzekudyara dzinotungamira mukuwana mari. Mupfungwa iyi, hapana mapfupiso anogona kuitika uye chiri chikamu chehurongwa hwakasimba hwekuwedzera yako kana yako midziyo yemhuri.
Mukati meichi chirevo chizere, ichokwadi kuti pazviitiko zvakawanda iwe hauzive zvekuita nemari inowanikwa uye kunyangwe zvichishamisa zvinogona kukumisira rimwe dambudziko mukutarisira kwako kusevha. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva kune yakakosha poindi yekutarisa yakapihwa nemisika yemisika. Hazvishamisi kuti, zvakakosha kwazvo kubata zviwanikwa zvemari uye kune izvi matipi atinozofumura pazasi anoitirwa. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune yakanakisa mamiriro kune simudza account yako yekutarisa kubva zvino zvichienda mberi. Izvo zviri kumagumo ezuva zvazviri, sekuziva kwako.
1 Mari inowanikwa: kuiisazve mari mumusika wemasheya
2 Nakidzwa purofiti nekukurumidza
3 Tora chinzvimbo chepakati
4 Zvikwereti zvinowanikwa
5 Chinja chigadzirwa chemari
Mari inowanikwa: kuiisazve mari mumusika wemasheya
Zano rekutanga raunogona kushandisa kubva zvino zvichienda mberi ndiro rekutanga pane zvese uye zvakare rinogona kuve nehasha. Izvo chaizvo zvinosanganisira izvi purofiti kuve chikamu chemari nyowani yekudyara. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kuwedzera kugona kwako kuburitsa purofiti mu kutenga nekutengesa masheya pamusika wekutengesa. Ichi chiito chinogona kuitwa nenzira dzakawanda uye imwe yadzo yakavakirwa pakuisa mari inowanikwa muhomwe nyowani. Ichokwadi kuti haufarire purofiti, asi mukudzoka uchave nemukana uri nani wekuwedzera zvinhu zvako.
Imwe yemaitiro aunogona kushandisa kubva panguva ino kuenda mberi kugara munzvimbo dzako. Sezvinei, usatengese zvikamu saka unogona kuramba uchiwedzera mari yaunowana zvakatowanda. Nekudaro, ino sisitimu inotakura imwe njodzi yazvino uye imwe yevanopomerwa mhosva ndeyekuti rombo rinogona kuchinja chero nguva. Kusvika padanho rekuti maitiro anotendeuka uye iwe unotomboenda kune yakapesana mamiriro, ndiko kuti, iwe unorasikirwa nemari. Chero zvazvingaitika, iri njodzi yekuti iwe unofanirwa kumhanya nekutora yakadaro ine hukasha investor profile. Kunyangwe mukufamba kwenguva, iwe unozonyatsokunda mukukonana uku kwaunako pamisika yemari.
Nakidzwa purofiti nekukurumidza
Zvisinei, mhinduro yakapusa yauinayo ndeyekutengesa migove. kuchinja kwakanaka saka unogona kunakidzwa nemari inowanikwa. Kuzvipa iwe zvishoma whim, kutora rwendo kunze kwenyika kana kungo gutsa yako mutengi zvishuwo. Kubatsira kwechirongwa ichi ndechekuti ichagara ichingobatika kana izvo zvakafanana uchave nemubairo webasa rako rekudyara. Hazvishamise kuti, ndiyo hunyanzvi hwakajairika kune vashoma uye vepakati varimari uye kupfuura zvimwe zvekufunga. Nekuti pakupera kwezuva mari ndeyekunakidzwa uye bhegi chishandiso chekuzadzisa izvi zvishuwo zvinodiwa.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa chero kupi kutengesa masheya pane akanakisa ekutsinhana mwero mumisika yemari. Izvi zvinoitwa nekuita kutengesa nemutengo wakapihwa newe, iwo unonyanya kukufadza nguva dzese. Pamusoro peizvo zvinonzi mitengo yemusika izvo zvinogara zvichitadzisa mashandiro, sekuziva kwako pachako. Hazvishamisi kuti ndiyo nzira yekumhanyisa capital kuwana zvishoma zvishoma. Kunyanya kana zvasvika pakuitwa kunoitwa mune ipfupi nzvimbo yenguva. Iko mutsauko pakati pemutengo wekutenga uye mutengo wekutengesa unowanzo kuve wakaderera nguva dzose.
Tora chinzvimbo chepakati
Mumusika wekutengesa, hazvisi zvese zvinhu nhema uye chena asi kune huwandu hwakawanda hwemumvuri iyo iwe yaunogona kushandisa kudzora mibairo mikuru inowanikwa mumisika yemari. Pakati pavo, imwe yeyakajairika ndiyo iyo inoreva kugovera iyo purofiti zvakaenzana kune akamboburitswa marongero. Ndokunge, iwe unogona kupira hafu yemari yacho kune ako whims whims kana kunyangwe kukwidza yako yemari rutsigiro. Nepo chikamu chasara chingashandiswa kuenderera mune yekudyara chikamu kuyedza kuenderera nekuyedza mhanza uye kuwana yakawanda capital kuwana.
Imwe yemabhenefiti yaunopihwa neiyi yakasarudzika nzira ndeyekuti iwe unogona kugara uchiita chengetedza nzira mbiri dzakataurwa kare. Mune zvikamu izvo iwe pachako unofunga zvakanyanya kukodzera nguva dzose. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuisa panjodzi purofiti yako zvakanyanya mukati menguva umo maitiro akajairika emusika wemasheya ari pachena kuwedzera. Nenzira iyi, haufungi kuti uchave nemikana yakawanda yekutora mari yakawanda mumisika yezvemari. Kunyangwe mune dzino zviitiko, iwe ndiwe uchafanirwa kutora danho rekuti uchafanirwa kugovera mari sei kubva zvino zvichienda mberi.
Imwe yemienzaniso yemhando yeiyi maitiro mune yekudyara chikamu inomiririra nekugovaniswa kwezvikamu. Iwe haugone kukanganwa kuti uyu mugovani wemubhadharo haugari unobhadharwa nemari. Nekuti pane izvo zvinopesana, iwe unogona kutungamirwa kuti uwedzere mari yako kuburikidza nezviito zvitsva. Izvi ndizvo zviri kuitwa nemakambani akawanda uye akanyorwa pabenchmarkmark yeSpanish stock market, Ibex 35. Kuburikidza nezano rekuchengetedza mari rinokunda kudyara uye rakanangana nehuremu hwemari hwakanyanya. : anochengetedza munhu anoda kutora mari yake kune yepakati nepakati refu.
Neiyi nzira, iko iko kuitika kweiyi manejimendi system ndeyekuti kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, mari yekudyara ichave yakakwira zvakanyanya kupfuura nakare. Hazvishamise kuti iwe uchave uine mamwe masheya semhedzisiro yekushandisirwa kwezvikamu zvakakosha izvi. Akanyorwa se Iberdrola, Repsol kana mamwe emabhangi makuru anozviita neakawandisa gore rega. Nekudaro, mune yekutanga nguva iwe hauzove nemari iyoyo ipapo ipapo mune yako yekutarisa account. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe uchafanirwa kumirira kwenguva yakareba kuti udzore, kunyangwe pamwe uine huwandu hwakawanda hwemari.
Chinja chigadzirwa chemari
Kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kushandisa iyo capital capital inowana kuisa mari mune imwe yemari kana kunyange zvigadzirwa zvebhangi. Semuenzaniso, nguva inoiswa, mari yekudyara, yakasununguka kana yakarongeka zvisungo. Ichave iri chaiyo nzira yekutanga ku tanga zvakarendiko kuti kubva pakutanga. Nezvinangwa zvitsva zvinofanirwa kuitwa neaya mashandiro. Iyo yakasanganiswa modhi iyo yakanaka chikamu chevashoma nepakati varimi vemari vanowira. Hazvina nani kana kushatisa kupfuura zvakapfuura, asi zvinopesana ndeimwe sarudzo yekuzvisarudzira yaunayo zvichienderana nenjodzi yaunoda kutora kubva zvino zvichienda mberi. Iwe unogona kusendamira kuma equities, asi zvakare kune yakatarwa mari kana kunyange kubva pane imwewo nzira kana isina kujairika nzira kune ako ekudyara.
Chero zvazvingaitika, sarudzo yesarudzo iyi chii haizokutenderi iwe kunakidzwa nemari inowanikwa, kungangoita chishuwo chako chepedyo. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe ucharamba uchibatanidzwa neinvestment chikamu, neimwe nzira kana imwe, zvinoenderana nemari yemari yakasarudzwa kumagumo. Izvi ndizvo zvinoitwa nevanhu vazhinji kudzivirira kuti mari dzavo dzimiswe pasina nguva. Kana vakasayedza kuzviita, ndiko kuramba vachitsvaga kudzoka kuri nani pamari yavo, chimwe chinhu chine musoro.
Chero zvazvingaitika, mhinduro inotakura njodzi shoma ndeyekutungamira iwo huwandu kune yakasarudzika chigadzirwa chemari chinogadzira diki yegore yekudzoka uye kunyangwe zvingave zvidiki sei. Around 1% kana 2%, semhedzisiro yemari yakachipa neboka rinoburitsa remasangano enharaunda. Ehe, icho chinhu chaunogona kufunga nezvacho kubva panguva ino pasina kuisa pangozi mihoro yako. Zvekuti nenzira iyi, iwe hauzviise panjodzi pahuwandu hwakawanda hwebatsiro iwe wawakawana mumisika yemari. Kwete chete pamusika wemasheya, asi kuburikidza nezvimwe zvigadzirwa zvemari kubva kumaquity mune avo akawandisa mafomati ekudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mari inowanikwa muhomwe yemusika, chii chekuita navo?
Zviri nani here kutora inoshanduka kana yakatarwa reti mogeji?